कृषि उपकरणसम्बन्धी जानकारी | गृहपृष्ठ
Home Uncategorized कृषि उपकरणसम्बन्धी जानकारी
कृषि उपकरणसम्बन्धी जानकारी
कम्पनीको नाम : साइको स्ट्रीपस प्रालि, भारत (नेपालमा डिष्ट्रिब्युटर खोज्दै)
उपकरणको नाम : लोटा भेटर
उत्पादक देश : भारत, लुधियाना
मूल्य : भारतमा यसको ८८ हजार रुपैयाँ पर्छ (७ फीटको)
यो विशेषगरी खेत जोत्न प्रयोग गरिन्छ । साथै, यसले खेत सम्याउने र बीउ छर्ने काम पनि गर्छ । यो मेशिन ४ देखि १४ फीटसम्मको छ । ५० हर्सपावरको ट्र्याक्टरमा जडान गर्दा यसले १ घण्टामा एक हेकड (१५ हजार वर्गफीट) जमीन जोत्न सक्छ । पहाडका लागि ४ फीटको मेशिन उपयुक्त हुन्छ । तराईमा भने सबै उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो मेशिनबाट थोरै डिजेलले धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीको नाम : बीटीएल ट्रेड प्रालि
उपकरणको नाम : मिनी टिल्लर
उत्पादक देश : चीन
मूल्य : ६५ हजार रुपैयाँ
यो पेट्रोलबाट चल्ने ७ हर्सपावरको मिनी टिल्लर हो । १ घण्टामा १ रोपनी खेत जोत्न सक्ने यसले प्रतिघण्टा १ लिटर पेट्रोल खपत गर्छ । यसको तौल करीब ५५ केजी छ । गार्डेन, टनेल, कान्ला, तरकारीखेतीका लागि तराईको समथर भूभागदेखि पहाडका कान्लासम्म यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो मेशिन खन्न, हिल्याउन, ड्याङ तथा कुलेसो बनाउन र पानी तान्न पनि प्रयोग हुन्छ । यो चिनियाँ कम्पनीले विशेषगरी पेट्रोलबाट चल्ने मिनी टिल्लर बनाउँछ । यसले बनाउने मिनी टिल्लर चलाउन सजिलो, हलुका र क्षमता राम्रो भएका छन् । यसको इञ्जिनले सीधै गियर बक्समा पावर सप्लाई गर्छ । त्यसैले, यसको बनावट पनि अन्य पावर टिल्लरको भन्दा फरक छ । ५ देखि ९ हर्सपावर क्षमताका यस्ता पावर टिल्लर डिजेल र पेट्रोल दुवैबाट चलाउन मिल्छन् ।
उपकरणको नाम : टिल्लर
मूल्य : ६० हजार रुपैयाँ
यो पेट्रोलबाट चल्ने ३ दशमलव ५ हर्सपावरको टिल्लर हो । यसमा फोर स्ट्रोक इञ्जिन छ । यो मेशिनको प्रयोग खासगरी ड्याङ बनाउने, कुलेसो खन्ने, झार उखेल्नेलगायत काममा गरिन्छ । डेढ फीटसम्म साँघुरो ठाउँमा लैजान सकिने यो उपकरण चियाबगान जस्तो साँघुरो ठाउँका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ । यसमा हिल्याउने, जोत्ने उपकरण जडान गरेर पनि काम गर्न सकिन्छ । यसको तौल करीब ३५ केजी छ । नेपालमा यो पहिलोपटक भित्रिएको छ ।
कम्पनीको नाम : नेशनल रेफ्रिजरेटर उद्योग
उपकरणको नाम : कोल्ड रूम
उत्पादक देश : स्वदेशी उत्पादन
मूल्य : ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ (२ टन स्टोर क्षमताको)
कच्चापदार्थ आयात गरेर स्वदेशमै यसको निर्माण गरिन्छ । दूध, आइसक्रिम, मासु, माछा, खानेकुरालगायत सामग्री चिसो राख्न यसको प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै, आलु, टमाटर, फलफूललगायत लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ । किसान, होटल, डेरी तथा मासु व्यवसायीलाई यो मेशिन अतिउपयुक्त छ । यसको मूल्य क्षमताअनुसार फरक पर्छ । २ टन सामान राख्न मिल्ने कोल्ड स्टोरको मूल्य ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्छ । यसले जिरो डिग्रीदेखि प्लस ४ डिग्रीसम्म तापक्रम दिन्छ । ग्राहकको आवश्यकताअनुसार तापक्रम मिलाउन सकिन्छ । यसलाई माइनस २० डिग्र्री तापक्रम पनि मिलाउन सकिन्छ ।
कम्पनीको नाम : इण्टरनेशनल ट्र्याक्टर्स लिमिटेड
उपकरणको नाम : सोनालिका जीटी २६ एचपी
उत्पादक देश : भारत
मूल्य : मेलाका लागि १० लाख रुपैयाँ
यो टोर ट्र्याक्टर हो । यो ट्र्याक्टर होटल, एयरपोर्ट, गल्फ ग्राउण्डलगायत ठाउँमा बढी प्रयोग गरिन्छ । साघुँरो क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको पछाडि टिल्लर जोडेर लगेज, ट्रलीलगायत सामान ओसारपसार गरिन्छ । सोनालिका ट्र्याक्टर ९० देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालमा कम्पनीले २० देखि १ सय २० हर्सपावरका ट्र्याक्टरको विक्री गर्दै आएको छ । नेपालमा यसका १५ हजारभन्दा बढी ग्राहक छन् ।
कम्पनीको नाम : दाहाल ट्रेडिङ कन्सर्न
उपकरणको नाम : फोगर
मूल्य : रू. ६० हजार
खेतबारी, ग्रीन हाउसलगायतमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका कीरा नियन्त्रणका लागि विषादी छर्न यसको प्रयोग गरिन्छ । यसको प्रयोग गरी डेङ्गी, अन्नबालीमा लाग्ने कीरा हटाउन सकिन्छ । एक स्थानमा बसेर एकपटक स्प्रे गर्दा करीब ६ बाई २० को क्षेत्रसम्म यसले असर गर्दछ । एकै स्थानबाट ठूलो क्षेत्रफलसम्म असर पुर्‍याउने हुँदा यसबाट बाली नोक्सानी कम गर्न सहयोग पुग्छ । व्यावसायिक खेती गरिने क्षेत्रका लागि यो बढी प्रयोग हुन्छ । यसको मुख्य विशेषता विषादीलाई धूवाँजस्तो बनाएर छर्ने हो । कम खर्च, समयको बचत, कम श्रमशक्ति प्रयोग हुनु पनि यसका विशेषता हुन् ।
उपकरणको नाम : ड्रायर
विभिन्न प्रकारका जडीबुटी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दहीलगायत खाद्यवस्तुमा रहेको पानी सुकाउन यसको प्रयोग गरिन्छ । यसको प्रयोगबाट तयार पारिएको वस्तु धेरै दिनसम्म सुरक्षित रहन्छ । एकपटकमा कम्तीमा १० केजीसम्म वस्तु राखेर सुकाउन सकिन्छ । १० केजीसम्मको वस्तु सुकाउन करीब १ दिन वा सोभन्दा कम समय पनि लाग्छ । कस्ता वस्तु सुकाउनुपर्ने हो, सोहीअनुसार यसको तापक्रम मिलाउनुपर्छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा भित्रिएको नवीनतम प्रविधिमध्ये यो पनि एक हो ।
कम्पनीको नाम : अकिष्टा नेपाल प्रालि
उपकरणको नाम : वर्षा पम्प
उत्पादक देश : नेदरल्याण्ड, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनीलगायत देश (पार्ट्स आयात गरी तयार पारिएको)
मूल्य : रू. १ लाख ६० देखि २ लाख ८० हजारसम्म
वर्षा पम्प अकिष्टाले विकास गरी बजारमा ल्याएको पहिलो हाइड्रो पम्प प्रविधि हो । यो एक यस्तो प्रविधि हो, जसले इन्धन वा बिजुलीविना नै खोला वा नहर, कुलोको पानीको बहावको शक्ति मात्रै प्रयोग गरी पानी तानेर ६० उचाइसम्म पुर्‍याउन सक्छ । त्यस्तै, यसको प्रयोगबाट २ किलोमिटर टाढासम्म पनि पानी पु¥याउन सकिन्छ । मुख्यगरी तरकारी खेती, माछापोखरी, थोपा सिँचाइ, एकीकृत खेती, फिरफिरे सिँचाइलगायतमा यसको बढी प्रयोग हुन्छ । ३ वर्षअघि मात्रै नेपालले तयार पारेको यो प्रविधि विश्वका १२ भन्दा बढी मुलुकमा प्रयोगमा आएका छन् । त्यस्तै, नेपालमा भने ४० भन्दा बढी जिल्लामा यो प्रविधि प्रयोगमा आएको छ ।
कम्पनीको नाम : चन्द्रागिरि मेशिनरी उद्योग प्रालि
उपकरणको नाम : सिड ड्रिल/तरकारी रोप्ने
मूल्य : रू ४ हजार ५ सय
तरकारीखेतीमा यो प्रविधिको बढी प्रयोग गरिन्छ । तरकारीको बेर्ना यो मेशिनभित्र राखेर सम्बन्धित ठाउँमा लगेर रोप्न सकिन्छ । यसको प्रयोगबाट कृषकले सहजै खेती गर्न सक्छन् । नेपालमा हाल यसको बढी प्रयोग पहाडी क्षेत्रमा हुने गरेको छ । व्यावसायिक तरकारीखेतीका लागि यसको प्रयोग बढी प्रभावकारी छ ।
कम्पनीको नाम : श्री नेशनल रेफ्रिजरेटर उद्योग
उपकरणको नाम : इन्कुबेटर मेशिन
उत्पादक देश : भारत (पार्ट्स आयात गरी तयार पारिने)
मूल्य : रू. २ लाख ६५ हजारदेखि शुरू
दही बनाउन तथा चिस्याउन यसको प्रयोग गरिन्छ । ४० डिग्रीमा तातो पारेको दूध करीब ४ घण्टासम्म यसको मेशिनभित्र राख्दा दही बनाउन सकिन्छ । मेशिनको प्रयोग गरी तयार पारिएको उक्त दहीलाई तत्कालै करीब १ घण्टाभित्रै चिसो बनाउन सकिन्छ । यसरी तयार पारिएको दहीको गुणस्तर अन्यको तुलनामा निकै राम्रो हुन्छ र करीब १ हप्तासम्म प्रयोग गर्न मिल्छ ।
उपकरणको नाम : पोटेटो ग्रेडर
मूल्य : रू. १ लाख २५ हजारदेखि १४ लाखसम्म
आलुलाई विभिन्न आकारमा तयार पार्न यो मेशिनको प्रयोग गरिन्छ । यसको प्रयोगबाट कृषकले सजिलै आलुलाई मागअनुसारको आकारमा तयार पारेर बेच्न सक्छन् । यो मेशिनले प्रतिघण्टा ५ सय केजीदेखि १० मेट्रिक टनसम्म आलु ग्रेड गर्न सक्छ ।
उपकरणको नाम : जिञ्जर क्लिनर
मूल्य : रू. १ लाख ७५ हजार
यसको मुख्य काम अदुवामा रहेका माटो सफा गर्नु नै हो । मेशिनको प्रयोगबाट अदुवालाई हानिविना कुनाकाप्चासम्म सफा गर्न सकिन्छ ।
उपकरणको नाम : सिड ग्रेडर
मूल्य : रू. २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार
यसको प्रयोग बीउ ग्रेडिङमा गरिन्छ । यसले बीउलाई चार प्रकारमा ग्रेडिङ गरी तयार पार्छ । शुरूमा राम्रो बीउ गे्रडिङ गरेर निकाल्छ । त्यसपछि कमसल बीउलाई दुई प्रकारमा गे्रडिङ गर्छ । हाल कम्पनीमा प्रतिघण्टा ३ सय केजीदेखि ५ सय केजीसम्म बीउ ग्रेडिङ गर्न सकिने मेशिन उपलब्ध छन् ।
तस्वीर : प्रदीप लुइँटेल
प्रस्तुति : मदन लामिछाने/कृष्णा शर्मा